Xildhibaanad Drs: Minna Xasan Shibis oo kulamo la qaadatay waxgaradka kasoo jeedo degmada Balcad (Sawiro).
Friday December 02, 2016 - 23:01:47 in Wararka by Xarunta Dhexe
Xildhibaanada Cusub ee dhawaan loo doortay baarlamaanka Soomaaliya Drs mina Xasan Shibis ayaa maanta waxey kulan la qaadatay qaar katirsan waxgaradka kasoo jeeda degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe.
Kulankaani oo isugu jiro mid ee bulshada reer Balcad ee ugu hambalyeenayeen xilka culus ee loo doortay Diktooreesada iyo mid xildhibaanada iyadada qudheeda ee uga mahad celineesa bulshada gobolka codka ee siiyeen.
Xaflada ayaa sidoo kale waxa kahadlay gudoomiyaha degmada balcad mudane Maxamad Maxamuud Saneey , xildhibaankii hore Qaasim furdug iyo gudoomiyii hore Mudane Xaadoole .
Xildhibaanada Minna Xasan Shibis oo warbaahinta la hadashay ayaa afka ku dhufatay iney degmada balcad ee kamid ah tahay degaanada ee matasho xildhibaanada isla markaana ee wax badan ka ogtahay baahiyooyinka hoose ee qabaan bulshada kunool degaanadaasi iyadoo balan qaaday in codkooda ee gaarsiin doonto meel sare.
Tan iyo marki loo doortay kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya Drs Mina xasan Shibis ayaa waxa iska soo daba dhacaayo hambalyada loo dirayo Xildhibaanada iyadoo dhamaan dhambaaladi lasoo gaarsiiyay shabakada Warsheekh ee ku qotomeen sida dadka soomaaliyeed ee ugu niyad san yihiin isla markaana ee kaga sugayaan waxqabad dhab ah.